एउटै टोलका साथीहरू पनि परदेशी जस्ता भए है ! - Balsirjana
भाइबहिनीहरू ! चीनबाट शुरु भएको कोभिड १९ ले सबैभन्दा बढी अमेरिकालाई प्रभावित बनाएको खबर हामीले सुनिरहेका छौं । ब्राजिल, बेलायत लगायतका ठूला र सम्पन्न मुलुकमा फैलिरहेको महामारीको मुख्य कारण सतर्कताको कमी मात्रै हो भन्ने कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताइरहेको छ । तर हामी नेपाली भने सकेसम्म सतर्कता अपनाएकै कारण अहिलेसम्म त्यति ठूलो महामारीको चपेटामा परेका छैनौं । विश्वमा भने महामारीका कारण धेरै धनजनको क्षति भैसकेको छ । विदेशमा रहेका सयौं नेपालीको मृत्यु पनि भएको छ । विदेशमा रहेकाको त कुरै छोडौं आफ्नै टोलमा रहेका साथीभाइहरू पनि परदेशी जस्ता भएका छन् ।
भाइबहिनीहरू ! हाम्रो टोल छिमेकमा रहेका आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइको अवस्था के छ, दिनचर्या के कसरी बितिरहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि फोन र इन्टरनेटबाट सम्भव छ । टोलका कसैका घरमा पनि रमाइलो गर्ने अवस्था छैन । पूजाआजा, विवाह ब्रतवन्ध, चाडपर्व मनाउने अवस्था पनि छैन । कसैको जन्मोत्सव, पास्नी, कुलपूजा आदिका कार्यक्रम पनि घरैभित्र बसेर मनाउनु परेको छ । राम्रा राम्रा कपडा लगाएर भोजभतेरमा जाने दिन कस्तो होला जस्तो भैसक्यो । लामो दूरीको सवारी साधनमा बसेर कतै घुमघाममा जानु भनेको कल्पना मात्रै हो कि जस्तो भैसक्यो । सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्नु भनेको बाध्यताले मात्रै हो, रहरले त कोही पनि सार्वजनिक सवारी चढ्दैनन् ।
भाइबहिनीहरू ! विदेशमा रहेका आफन्त र इष्टमित्रहरू कहिले आउँछन्, के उपहार ल्याइदिन्छन् भनेर दिन गनेर बस्ने बानी परेका हामी अहिले त उनीहरू नआइदिए हुन्थ्यो, आउँछु नभने हुन्थ्यो भन्ने अवस्था छ । कसैको घरमा भेट्न नजाँदा गालि खानु पथ्र्यो पहिला तर अहिले त भेट्न गयो भने गाली खानु पर्छ । कसैसँग भेट हुँदा नजिकै परेर गफ गरेन भने किन तरक्क तर्केको ? भन्थे अहिले नजिक प¥यो भने कस्तो मान्छे रहेछ ! सामाजिक दुरीको ख्यालै नगर्ने पो भन्छन् है ! त्यसैले आजभोलि एउटै टोलका साथीभाइहरू पनि परदेशी जस्ता पो भए त है !
पछिल्लाे - नयाँ वर्षको नयाँ अनुभव
अघिल्लाे - नयाँ वर्षको नयाँ अनुभव